चीन सौर्य ऊर्जा जडानकर्ता निर्माता र आपूर्तिकर्ता - HuaYi-FaDa टेक्नोलोजी
हामीबाट थोक उच्च गुणस्तरको सौर्य उर्जा कनेक्टर! HuaYi-FaDa टेक्नोलोजी सोलार पावर कनेक्टर, UL कनेक्टर, वाटरप्रूफ स्क्रू कनेक्टर, वाटरप्रूफ केबल कनेक्टर, M6 कनेक्टर, वाटरप्रूफ एलईडीको उत्पादनमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने एक निर्माता हो।
चीनमा बनेको सौर्य ऊर्जाको लागि गुणस्तर अनुकूलित MC4 कनेक्टर! MC4 सबै नयाँ सौर प्यानलहरूमा जडान प्रकारको नाम हो, जसले IP67 वाटरप्रूफ र डस्टप्रुफ सुरक्षित विद्युतीय जडान प्रदान गर्दछ। सौर्य प्यानलबाट सुरक्षित रूपमा बिजुली निकाल्नको लागि MC4 कनेक्टरहरू जोडिएका छन्। अझ प्रभावकारी तरिका भनेको केबल किन्नु हो जसलाई तपाईंले आवश्यक पर्ने लम्बाइमा काट्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि MC4 कनेक्टरहरू जोड्नुहोस्। हामी MC4 जडानकर्ताहरूसँग अनुकूलन कट लम्बाइ केबल प्रस्ताव गर्दछौं।
हामीसँग हाम्रो मुख्य उत्पादनको रूपमा चीनमा निर्मित गुणस्तर सौर्य उर्जा कनेक्टर छ, जुन सस्तो मूल्यमा किन्न सकिन्छ। HuaYi-FaDa टेक्नोलोजी चीनमा प्रसिद्ध सौर्य उर्जा कनेक्टर निर्माता र आपूर्तिकर्ताहरू मध्ये एकको रूपमा चिनिन्छ। हाम्रो कारखानामा आउन र हाम्रो निःशुल्क नमूना र उद्धरणको साथ अनुकूलित सौर्य उर्जा कनेक्टर किन्नको लागि तपाईंलाई स्वागत छ। हाम्रा उत्पादनहरू CE, UL प्रमाणित छन् र3वर्षको वारेन्टी प्रदान गर्छन्। थोक मूल्यहरू बढी उचित छन्। हामी ईमानदारीपूर्वक तपाईंको सहयोगको लागि तत्पर छौं।